UiPath: serivisy amin'ny tranokala azo itokisana - Semalt Expert
Ny tranonkala dia natsangana tamin'ny fampiasana tenim-paritra toy ny XHTML sy HTML ary ahitana harena fampahalalana mahasoa amin'ny endritsoratra sy sary. Web web scraper dia Application Programming Interface (API) izay mamoaka vaovao avy amin'ny bilaogy sy tranonkala maro. Ny orinasa tahaka an'i Google sy Amazôna dia manome fitaovana maimaim-poana amin'ny tranonkala ahafahana manao ny asanao. Ny UiPath dia tsara kokoa noho ny serivisiana tsotra na ny teknikan'ny tranonkala tsotra. Ity fitaovana ity dia manjary miditra amin'ny tranonkala iray, mamoaka ireo angona izay mandrindra ny pejy Internet, ny sivana ary manova azy ho endrika hafa.Avy eo dia mameno ireo rakitra mivantana amin'ny fiara sarotra ary mamonjy ny fotoananao sy ny herinao. Tahaka ny tranonkala Internet sy mpitsikilo izay afaka manova ny tranokalanao izany. Ny UiPath dia manampy amin'ny fanatsarana ny lozam-pifanarahana amin'ny tranokalanao ary mamorona mpikaroka tranonkala ho anao.
Tranok'asa manan-danja taranja:
Azonao atao ny mampiseho ny angon-drakitra na amin'ny aterineto. Ohatra, raha tianao manangona angon-drakitra avy amin'ny tranonkala iray mavitrika na tranokala e-commerce ianao, dia tsy maintsy ampidirina ny URL -nao ary avelao hanao ny asany i UiPath. UiPath dia hampitaha ny fampahafantarana ny vokatra sy ny famaritana vokatra momba ny Alibaba, Ebay, ary Amazon, manome anao valiny marina sy azo antoka.
Tsara ho an'ny matihanina:
UiPath manome antoka ny famokarana mahomby ary mahasoa ho an'ny matihanina, mpamorona, webmasters, ary mpandraharaha. Manamaivana ny tetikasam-pitrandrahana ny data ary manome valiny marina sy mahomby ao anatin'ny minitra vitsy. Toy izany koa, ity fitaovana ity dia tsara ho an'ny mpikaroka ary manampy azy ireo manaparitaka ny gazetiboky an-tserasera sy ny eBooks tsara.
UiPath no tena fantatra noho ny interface-friendly interface. Azonao atao mora foana ny manoratra lahatsoratra avy amin'ny vavahadin-tserasera sy bilaogy manokana miaraka amin'ity serivisy ity. Afaka mametaka sary, lahatsary ary horonam-peo, tahirin-kevitra PDF sy HTML ho an'ireo mpampiasa. Ity fitaovana ity dia miara-miasa tsara amin'ny pejy web, noho ny endriny manokana, mba hahafahana manao izany.
Fahalalahana manondrana entana:
Mifanohitra amin'ny fitaovana maotina amin'ny tranonkala tsotra, ny UiPath dia manana fahaiza-manao enti-manentana tsara. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity, dia afaka mamonjy ireo angon-drakitra amin'ny rakitra an-tsoratra, manondrana any XML sy HTML ianao, na manaparitaka izany amin'ny discom disk. Ity fitaovana ity dia mifanaraka amin'ny rafitra rehetra sy ny navigateur web. Ny UiPath dia manadihady lalindalina kokoa, mamorona tatitra miverimberina, ary mandefa ny angon-drakitra voasintona ho an'ny FTP ho an'ny fampiasana ivelan'ny aterineto. Azonao atao aza ny mandefa azy ao amin'ny rakitra matevina na manangona ny angona ao anaty tahiry.